Negbọelu adaala n'oké osimiri n'azụ nwanyị na-ese foto ịmụ nwa na ihe nkiri na-awụ akpata oyi n'ahụ - SANTE PLUS MAG - TELES Relay
Negbọelu adaala n'oké osimiri n'azụ nwanyị na-ese foto ịmụ nwa na ihe nkiri na-awụ akpata oyi-SANTE PLUS MAG
Tugharia ya na akwukwo ozi ndi Britain The Independent, ndị a na-asa ahụ ese foto ndị a. Na ezi ihe kpatara ya, onye na-agba bọmbụ na-esonye na ikuku na Florida bụ ajuju n'oké osimiri nke ndị njem nleta jupụtara. Kyle Johnson, 23, nọ na ọnọdụ nke ihe ahụ merenụ. Ọ nọ na-ese foto nke enyi ya nwanyị dị ime, mgbe ọ hụrụ ka ụgbọelu na-erute n’ikpere mmiri ahụ.
የሰማይ አካላት@cnnbrkየሰማይ አካላት@CNNIhe ngosi ikuku nke Cocoa Beach pic.twitter.com/gb5ea7r6gP
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm April 17, 2021
"Planegbọ elu ahụ na-efe ala na ala"
Kristen Someen, 22, gbara igwefoto enyi ya nwoke na mama ya, Amber Ditmer, iji jide ya ncheta afọ ime. Obere ezinụlọ ahụ na-ekpori ndụ n'ụsọ osimiri mgbe ụgbọ elu ga-eme mmiri ọdịda mberede. Ndị na-atụ bọmbụ TBM Avengers keere òkè na ikuku mgbe ọdachi dakwasịrị ya ma manye ya ịda n'oké osimiri. “Nwa m nwanyị Kristen chọrọ were foto nnuputa n'ụsọ osimiri. Nwa m nwanyị nke ọzọ dị afọ iri na anọ nọ na mmiri ahụ wee tụọ aka n'ụgbọelu na-abịarukwu nso. Amalitere m ise foto nke ụgbọ elu na-efe ala na ala. Enwere ndị mmadụ ebe niile ”na-agba akaebe, na nju, nne Kristen.
TBM Avengers okuku Isi mmalite: Amber Ditner / Carters News
“Echere m na a ga-enwe ọdachi”
N’ịbụ ndị ihe nkiri ahụ na-egosi n’anya ha juru ha anya, ndị hụrụ ihe a merenụ tụrụ anya na ha ga-enweta ezigbo ọdachi. “Echere m na a ga-enwe ọdachi na onye ọ bụla kwụsịrị ịkwaga. Anyị na-ele ya ka ọ dara na mmiri na Ọ dabara nke ọma, ọ dịghị onye merụrụ ahụ. Onye ọkwọ ụgbọelu jisiri ike gafere mmadụ niile. Ndị ahụ na-asa ahụ ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ ”ka Amber Ditmer na-agbakwụnye. Ndị ọrụ mberede bịarutere ozugbo na ebe ahụ ma nwee obi ụtọ, onye ọkwọ ụgbọ mmiri jisiri ike daa nwayọ n'enweghị mmerụ ahụ ọ bụla.
“Ọ bụ ihe na-akpasasị uche”
Mama Kristen gara n'ihu na akụkọ ya site na ịkọwa na onye ọkwọ ụgbọ elu ahụ gbapụkwara n'enweghị nsogbu. “ O were nkeji ole na ole tupu ọ pụta. Ọ ghaghị ime ka okpu agha ya kpọnwụọ. Ndị na-agafe agafe swam ya ma nyere ya aka, wee nyere aka rute ”. Ihe omume nke n’enweghi nsonaazụ dị egwu, yabụ, ọ na - ewute ndị akaebe. “Ọ bụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ n'ihi na ujo ahụ, ị ​​maghị ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere nsogbu. O doro anya na onye ọkwọ ụgbọ elu na ndị na-egwu mmiri dị mma, mana ụgbọ elu ahụ nọrọ na mmiri ruo mgbe ụbọchị ole na ole gachara jiri kreenu dọpụ ya, “ka Amber na-ekwu. Ndị na-ahazi ngosi ụgbọ elu nke ụgbọelu ahụ soro soro wepụta nkwupụta na-ekwusi ike na onye ọkwọ ụgbọelu ahụ dị mma ma na ihe ahụ emeghị mmadụ ọ bụla.
GCHKWUO: TBM Avenger ụgbọelu dara na oke osimiri n'ụsọ osimiri Florida na-ekwo ekwo n'oge ngosi ikuku https://t.co/HYizsXk4KY pic.twitter.com/F6xvLAmkAX
Kedu ihe bụ nsogbu nrụgide post-traumatic?
Ngosipụta na nsogbu na-emerụ ahụ nwere ike ibute mbibi dị ukwuu nye ndị mmadụ ahụla ma ọ bụ hụ ya. Mgbe oge ndị a mechara, a na-akpọ ya nsogbu esemokwu post-traumatic. Jụrụ Doctissimo, Hélène Romano, bụ́ dọkịta na-akụzi akparamàgwà mmadụ, na-akọwa na mgbaàmà ndị a pụtara “n'ime ndi mmadu ekpughere onwu, dị ka ndị metụtara ma ọ bụ ndị akaebe ”. Maka psychotherapist ọkachamara na metụtara, ma ọ bụrụ na ụfọdụ jikwaa imeri nchegbu a na-enweghị enyemaka nke ọkachamara, a na-atụ aro ka ị kpọtụrụ onye ọkachamara trauma nke nwere ike inye ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị dịka ọnọdụ onye ọrịa ahụ si dị.
Edemede a pụtara na mbụ na https://www.santeplusmag.com/un-avion-secrase-en-mer-derriere-une-femme-prenant-des-photos-de-maternite-dans-des-images-choquantes /
Sonatel na-akwado ego ya na West Africa
n'ihu European Parliament, Rabat adịghị eweda ụda - Jeune Afrique